mercredi, 22 janvier 2020 22:05
Fanodinkodinana « Panier garni » : Nidoboka am-ponja eto Farafangana ny DRENTP Atsimo Atsinanana teo aloha
Tazomina am-ponja vonjimaika eto amin’ny fonjan’i Farafangana, nanomboka ny tolakandron’ity alarobia 22 janoary 2020 ity, ny talem-paritry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arak’asa teo aloha tato amin’ny Faritra Atsimo Atsinanana.
Fanodinkodinana volam-bahoaka, ilay « Panier garni » tolotra avy amin’ny filoham-pirenena, ary koa fanararaotam-pahefana no vesatra anenjehana azy, taorian’ny famotorana nataon’ny Zandary GAPJ Atsimo Atsinanana.
mercredi, 22 janvier 2020 21:50
Maroc: Nisy nangalatra ireo famantaranandro lafo vidy an’ny mpanjaka Mohammed VI
Vehivavy iray mpiasa ao an-dapa Marrakech no ahiahiana fatratra ho nahavita ity halatra ity. Tsy mba famantaranandro iray fa maromaro, ary lafo vidy tokoa. Niaiky ilay ramatoa fa nangalatra, nolaviny kosa ny fisian’olon-kafa nitsikomba taminy.
Na izany aza miisa 25 ireo olona voarohirohy sy nanokafana fanadihadiana amin’ity fahaverezan’ny famantaranandron’ny mpanjaka Mohammed VI ity, anisan’izany ireo mpivarotra volamena, ireo tomponandraikitra amin’ny « renseignements généraux » ao Marrakech.
Misy 1,2 tapitrisa dolara ny tentimbidin’ny famantaranandro iray anaovan'ny mpanjaka Mohammed VI. Tsy voalaza na isan’ireo very izy io.
Nahemotra ho amin’ny herinandro ambony io ny fitsarana ity raharaha ity.
mercredi, 22 janvier 2020 21:45
Mandritsara: Raim-pianakaviana iray novonoin’ny dahalo, telo hafa naratra, iray takalonaina
Notafihin’ny andian-dahalo mitam-basy tao Andranokazo II, Kaominina Ambilombe, Distrikan’i Mandritsara ny alin’ny talata hifoha ny alarobia 22 janoary 2020. Tokantrano miisa enina no nitetezin’ireto dahalo ireto, norobaina narahina herisetra.
Vokany, raim-pianakaviana iray, 40 taona eo, no namoy ny ainy, telo hafa naratra. Mbola naka olona iray natao takalonaina ihany koa ireo dahalo. Tombanana eo amin’ny 8 tapitrisa Ariary eo ny entana lasan’izy ireo.
Nanao ny fanarahan-dia avy hatrany ny Zandary avy ao amin’ny Poste Fixe Loharano, vao nahazo fampandrenesana.
mercredi, 22 janvier 2020 21:32
Ifotaka – Amboasary Atsimo: Miaramila mamo nitifitra olona tsy salama saina
Ny talata 21 janoary 2020 no niseho ity loza ity, tao an-tsenan’i Fenoaivo, Kaominina Ifotaka, Distrika Amboasary Atsimo. Miaramila kilasy faharoa, DAS avy ao Andamilamy, Ambovombe Androy namonjy tsena tao Fenoaivo no nahavanon-doza rehefa nentin’ny hamamoana.
Olona tsy salama saina no notifiriny, ka tapaka ny tongony havanana. Tsaboina ao amin'ny hopitaly Ambovombe ny maratra. Efa nalefa ao Ambovombe ihany koa ilay miaramila nahavanon-doza.
Nidina tao Ifotaka ny kolonely komandin’ny BOA N°03 androany nifampiresaka tamin'ny fianakavian'ny voatifitra nangataka hanao raharaham-pihavanana fa notsaboina aloha ny maratra.
mercredi, 22 janvier 2020 21:30
Viriosy sinoa: « Efa misy ny fepetra matotra raisina », hoy ny ministeran’ny fitaterana malagasy
Nanao fampitam-baovao ao amin’ny pejiny androany ny ministeran’ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro, manoloana ny trangana valan'aretina misy any ivelany, toy ny any Chine.
« Efa misy ny fepetra matotra raisina mahakasika ny fitiliana ara-pahasalamana eny amin’ny seranam-piaramanidina sy ny seranan-tsambo rehetra eto Madagasikara. Anatin'izany fepetra izany ny fisian'ny toerana voatokana handraisana an-tanana ireo misy soritr’aretina », hoy ny fanambarana.
Hatramin’ny androany atoandro dia efa 17 izao ny olona matin’ity viriosy sinoa na « coronavirus » ity. Ankoatra ny tao Wuhan any Chine nahitana azy voalohany iray volana lasa izao dia efa voakasik’ity viriosy ity ihany koa izao any Japon, Korea Atsimo, eny hatrany Etazonia.
mercredi, 22 janvier 2020 20:56
Fitakian’ny SECES: Hanan-danja ny fivorian’ny telo tonta amin’ny zoma
Tao aorian’ny fihaonan’ireo solontenan’ny sendika SECES tamin’ny Praiminisitra ny 17 janoary 2020 teo dia hisy ny fivoriana hiarahan’ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny Minisitry ny fitantanam-bola sy ny toekarena, amin’ireo SECES ny zoma ho avy izao, handinihana ny hamaliana ny fangatahan’izy ireo mahakasika ilay vola goavana tsy mbola voaloa, isany votoatin’ny fitakian’izy ireo.
mercredi, 22 janvier 2020 20:19
Toetrandro: Hiditra an-tanety anio alina ao amin'ny faritra Melaky ilay Tangovan-drahona
Tany amin'ny 105km andrefana avaratry Besalampy ity rivotra arahin'orana ity tamin'ny 03 ora tolakandro teo.
Mitondra rivotra 55km/ora sy tafiotra hatramin'ny 65km/ora, ary mikisaka miatsinanana amin'ny hafainganam-pandeha15km/ora.
Hiditra an-tanety anio alina ao amin'ny faritra Melaky izy, ary hamakivaky any Betsiboka, avaratry Analamanga, Alaotra ary hivoaka amin'ny faritra Atsinanana ho amin'ny rahampitso hariva.
Tsy azo sokajiana ho rivo-doza izy satria kely ny heriny, nefa kosa dia hitondra rivotra mafy sy orana izy, indrindra ny amoron-dranomasina sy ny Faritra Boeny.
Entanina izany ny rehetra andray fepetra, tsy andriaka ireo faritra misy izany, ireo zavatra na entana mora manidina azon'ny rivotra, ny biby fiompy, ny rano fisotro.
Mahereza ireo Faritra andalovany.
(Sary Satellite 20h15)
mercredi, 22 janvier 2020 20:15
Oniversitem-panjakana: Hiara-hanomboka amin’ny volana Martsa 2020 ny taom-pianarana vaovao
Nifarana omaly 21 janoary ny CoPRIES (Conférence des présidents ou recteurs d’institutions d’enseignement supérieur) rehefa naharitra roa andro. Tapaka tamin’izany ny fidirana amin’ny taom-pianarana vaovao izay hanomboka amin’ny volana Martsa 2020.
Nanome toky teo anatrehan’ny rehetra ireo filohan’ny oniversite nahitana fitokonan’ny mpampianatra fa hanao izay fara heriny handresy lahatra ireo mpampianatra mba hamita ny taom-pianarana.
mercredi, 22 janvier 2020 20:04
Fifamoivoizana: Ireo làlam-pirenena misy fahatapahana
Nisy fahatapahana ny fifamoivoizana amin'ireto lalam-pirenena manaraka ireto nanomboka ny talata 21 janoary 2020, noho ny rotsak'orana tsy mihato sy fiakaran'ny rano:
- RNP6 - PK 525+600 Manehoko, fihotsahan'ny làlana noho ny fahaverezan'ny fantson-drano lehibe tao ambany làlana
- RNP4 - PK 465 Fasikabe Ankarafantsika
- RNP4 - PK 443+500 Bongamaranitra / Andranofasika
- RNP4 - PK434 Anjiajia
- RNP4 - PK467 Befotoana Ankarafantsika
mercredi, 22 janvier 2020 20:02
Katerína Sakellaropoúlou: Vehivavy voalohany, voafidy ho filohan’i Grèce
Vato 261 amin’ny 300 no nandanin’ny depiote grika azy androany. Katerína Sakellaropoúlou no vehivavy voalohany, voafidy ho filohan’i Grèce.
Mpitsara i Katerína Sakellaropoúlou, filohan’ny Filankevi-panjakana grika. 63 taona izy ankehitriny.